विदेशबाट पैसा पठाउँदै हुनु हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको विनियमदर – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २६, २०७८ समय: ११:३५:३०
काठमाडौँ-नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरेको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ ।
बेलायती पाउण्ड एकको खरिददर १६४ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १३९ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १४० रुपैयाँ ०२ पैसा रहेको छ ।
कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुन देशको मुद्राको दर कति ?
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल श्रावण २६ गते मंगलबार इश्वी सन २०२१ अगस्त १० तारीख श्रावण शुक्लपक्ष द्वितीया तिथी मघा नक्षत्र पश्चात पूर्वफाल्गुनी नक्षत्र परिघ योग कौलव करण चन्द्रमा सिंह राशिमा आनन्दादि योगमा काल योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
Last Updated on: August 10th, 2021 at 11:35 am